koonfur Afrika oo xuduudaheeda u xidhatay soolabakaclaynta cudurka Covid-19 awgii - Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
koonfur Afrika oo xuduudaheeda u xidhatay soolabakaclaynta cudurka Covid-19 awgii
On Jan 12, 2021 98
Addis Ababa,Jan 12, 2021 (Dir 04,2013 T.I (FBC/SOMALI)-Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa ku dhawaaqay in xuduudooda dhuleed ay ka xidhnaan doonto inta badan socdaalayaasha ilaa iyo 15-ka bisha Febraayo, tallaaabadan oo lagaga hortagayo faafitaanka cudurka coronavirus.
Khudbad uu telefishanka ka jeediyay habeennimadii Isniinta ayuu madaxweyne Ramaphosa ku sheegay in aafada ka jirta Koonfur Afrika ay haatan marayso meeshii ugu xumayd, iyada oo tirada caabuqyadu ay aad uga badaniyiin mawjawdihii ugu horrreeyay ee fayraska.
Wuxuu yidhi waxaa jiray ku dhowaad 190,000 kiis oo la diiwaangeliyay tan iyo Maalintii bilowga Sannadka Cusub, waxaana hadda jira in ka badan 15,000 oo qof oo Covid-19 u jiifa cisbitaalka.
Xayiraadii la soo rogay dhammaadkii Diseembar ayaa lasii kordhin doonaa.
Waxa la mamnuucay goobaha khamriga, meelaha dalxiiska sida xeebaha sidoo kale waxa la mamnuucay kulamada bulshadu ay isugu imanayso.
Madaxweynaha Ramaphosa ayaa ka digay in aasku u faafitaanka fayraska uga sii darayo.
“Aasku wuxuu dabin dil ah ku noqday dad badan oo dadkeena ah,” ayuu yidhi, isaga oo dadka ku boorriyay inay guryahooda joogaan.
Madaxweyne Ramaphosa wuxuu sheegay in barnaamijka talaalka ee Koonfur Afrika ay qorsheyneyso in la hirgeliyo uu noqon doono mashruucii ballaadhnaa ee taariikhda dalkaasi la gaadhsiiyo.
Wuxuu sheegay in 20 milyan oo xaddiga tallaalka ah mar horeba la hubiyay, oo la keenayo bilaha soo socda, wada-xaajoodyaduna ay weli u socdaan shirkado kala duwan oo soo saarayaal ah.